Madaxweyne Butafaliqa oo dib ugu soo laabatay wadankiisa Aljeeriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 11, 2019 198 0
Iyadoo weli bananabaxyo xoogan ay ka socdaan wadanka Aljeeriya, kuwaas oo looga soo horjeedo musharaxnimada markii shanaad uu Butafaliqa ku doonayo inuu ku qabto talada wadankaas, ayaa madaxtooyada waxay ku dhawaaqday in madaxweynuhu soo noqday.
War kasoo baxay xarunta madaxtooyada dalkaas ayaa lagu sheegay in gelinkii dambe ee shalay oo Axad ahayd uu Cabdil-caziiz Butafaliqa dib ugu soo noqday dalka, kadib labo todobaad oo uu safar caafimaad ugu maqnaa wadanka Swizerland.
Soo laabsahda Butafaqliga ayaa dadka Aljeeriya waxay kusoo dhaweeyeen banaanbaxyo hor leh iyo iney ka go’antahay iney wadaan isku soo baxyada illaa iyo inta uu ka tanaazulayo musharaxnimada.
Gudiga ololaha doorashada ee Butafaliqa ayaa sheegaya in caafimaadka madaxweynaha uu wanaagsanyahay, islamarkaana ay ka go’antahay inuu tartamo, waxaana 20 sano oo xiriir ah uu ninkan gacanta ku hayaa talada wadanka Aljeeriya.
Lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, iyo in ugu dambeyn uu Butafaqliga tanaasuli doono, waxaana haddii ay taas dhici weyso ay ka dhigantahay banaanbaxyada oo sii socda, iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka oo sii xumaata.